I-ASP RSS Parser, Isifundi Somfundi | Martech Zone
ASP RSS Parser, Okuphakelayo Reader
NgoMsombuluko, Disemba 26, 2005 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngaqala ngokubhala i-parser yami ku-ASP ngisebenzisa into ye-MSXML. Ngikwazile ukuhlwaya cishe ama-75% we-RSS feeds enza lokhu, kepha okunye ukucaciswa kweXML okuxekethile kuma-RSS feeds kube nzima kakhulu ukuwahlela. Ungayibona isebenza lapha. Ungadlulisa inani eliphakeme lezinto (ni), inani lezinhlamvu ezisikiwe egameni (nc), kanye ne-URL. Ungabona futhi okuphakelayo kwangempela ngokuhlukahluka kokulungisa iphutha lapha.
Okuphakelayo okuningi kwe-RSS 'kungcolile' impela futhi kudinga ukwehlukanisa umbhalo kufayela le-XML ngekhodi yokukhohlisa ngentambo (ugh!). Vele, sisese 'kwentsha' yethu ye-RSS enetheni ngakho-ke angimangazi. Funda kabanzi mayelana nokucaciswa kwe-RSS lapha.
Ekugcineni, ngathola igugu elincane. Ngithole isigaba samahhala se-ASP esingasilanda. Ihamba kancane, kepha angikatholi okuphakelayo ebingakwazi ukukufunda. Ngine-static version lapha nenguqulo enamandla lapha.
Amanothi ambalwa embhalweni. Bengidinga ukusula amanye amathegi we-HTML encazelweni ezibuyisiwe. Ngikwenze lokho ngomsebenzi omncane wokuhlanza engiwutholile:
Umsebenzi Susa i -HTML (strText) Dim nPos1 Dim nPos2 nPos1 = InStr (strText, ">") Yenza Ngenkathi nPos1> 0 nPos2 = InStr (nPos1 + 1, strText, ">") Uma nPos2> 0 Bese strText = Kwesobunxele (strText, nPos1 - 1) & Mid (strText, nPos2 + 1) Else Exit Do End If nPos1 = InStr (strText, ">") Loop SusaHTML = strText End Function
Ngibuye ngangeza enye ikhodi encane ecocekile: Kwesinye isikhathi, ngingahle ngifune ukukhombisa incazelo engaphezulu noma encane. Kodwa-ke, uma ngimane ngilinganisela inani labalingiswa, khona-ke ngingahle ngiyinqume incazelo phakathi kwegama. Angifuni ukwenza lokho!
Umsebenzi Cutoff (strText, intChars) dim intLength dim j intLength = len (strText) uma intChars> intLength bese kuba j = intChars to 0 step -1 if mid (strText, j, 1) = "" then exit for next if j> 0 bese strText = left (strText, j-1) & "..." else strText = strText end if end if Cutoff = strText End Function
(Ngibe nezinkinga ezithile ngokubonisa ikhodi yami kahle kulokhu kungena… ungazise uma unezinkinga ngomunye wale misebenzi!)
Ngibonile amanye amathuluzi ambalwa enetheni futhi. Kukhona I
Ukuphetha, ngithemba ukuthi ukucaciswa kwe-RSS kuyaqhubeka nokuhlanjululwa futhi okuphakelayo uqobo kuhambisana namazinga weXML kuwo wonke amacala. Izicelo zamahhala ezifana ne-TypePad, WordPress, njll zidinga ukwenza ngcono ukusebenza kwazo kwe-RSS. Amabhulogi angeziwe afana ne-MySpace, i-Xanga, i-LiveJournal, njll. Adinga ukuthuthukisa ukusebenza kwawo kwe-RSS. I-RSS inamandla…UChris Baggott ubhale ucezu oluhle ku-imeyili vs. RSS. Ngicabanga ukuthi ukuhlanganisa ukusebenza kwabo kungakhuphula umthelela wabo bobabili!
Tags: i-aspumhleliRSSumhleli we-rss
I-Arrrgh Microsoft Office VBA neXML!